China 5T flake chando muchina fekitari uye bhizimisi | Herbin Ice Maitiro
5T / zuva flake chando muchina wekugadzira matani mashanu echando maflakes mazuva ese, mukati maawa makumi maviri nemana.
Isu tinopa 5T / zuva flake chando muchina. Yakakwira mhando ine 2 gore garandi. Tinozvitsaurira kumagetsi echando michina kubvira 2009, uye michina yedu inovhara mazhinji emisika yeEuropean neAmerica. Tiri kutarisira kukushandira neyedu yakasimba uye inochengetedza simba-flake ice technology.
1. Ice inogadzirwa neyedu 5T / zuva flake ice muchina.
Mazaya echando akagadzirwa neyedu michina yechando echando akanyatsoomeswa nechakanakisa kutonhora kuita. Mazaya echando akakora uye akaoma.
Dzakakomberedza matani mashanu eaya akakwirira echando maflakes anogona kugadzirwa zuva nezuva mukati memaawa makumi maviri nemana, uye kuti chando zuva nezuva chinogadzira chinzvimbo chakakomberedzwa ne30C ambient tembiricha, 20C inlet mvura inodziya
Iyo chando ukobvu renji iri pakati pe 1.5-2.3mm. Uye kukora kwechando kuri kuchinjika.
Aya mazaya echando anoshandiswa zvakanyanya kuomesa hove, kuchengetedza chikafu chitsva, kugadzira chikafu, kutonhodza kongiri, pabhodhi hove icing, kushandiswa kwemakemikari zvichingodaro.
Izvo zvinogadzirwa neGreen simba-rinoponesa mafake echando michina, uye simba rekushandisa pakuita yega 1 toni yemazaya echando inongova 75KWH chete.
2. Zvinyorwa wepa 5T / zuva flake chando muchina.
Yedu 5T / zuva flake chando muchina kugona kwacho kunoenderana ne30C ambient tembiricha uye 20C inlet mvura tembiricha. Iine mamiriro akajairika ekushanda, inogona kuita ingangoita mashanu matani echando maflakes mazuva ese, mukati maawa makumi maviri nemana.
Iyo yakarongedzwa neSilver alloy evaporator, iyo ine yakanyanya kunaka yekupisa conductivity. Kupisa kupisa pakati pemvura uye firiji kunogona kuitwa zvakanyanya. Nechikonzero ichi, iyi 5T / zuva flake ice muchina inoshandisa chete 375KWH yemagetsi ekugadzira matani mashanu echando mafuru. Mamwe maChinese 5T / zuva flake chando muchina unodya ingangoita 525 KWH yemagetsi ekugadzira matani mashanu echando. Musiyano wezuva nezuva wekushandisa magetsi ndeye 150KWH.
Mumakore gumi, mutsauko uchave 547500 KWH yemagetsi. Tinoverenga tichishandisa 150x365x10 = 547500.
Sarudza yangu 5T / zuva flake chando muchina, iwe uchabhadhara zvakati wandei kumagetsi bhiri nekuchengetedza 547500 KWH yemagetsi mumakore gumi.
80% yezvinhu pane iyo 5T / zuva flake chando muchina ndeyepasi rose mukurumbira brand. Kune compressors, isu tinosarudza pakati peBitzer, GEA Bock, Frascold, Refcomp, zvichingodaro. Zvemidziyo yekumanikidza, senge oiri anoparadzanisa, inogamuchira mvura uye zvichingodaro, tinosarudza Emerson kana O&F, ayo anozivikanwa uye anoshandiswa zvakanyanya kune epamusoro mhando firiji masisitimu. Zvichakadaro, mavhavha eDanfoss, vateveri veZiehl-Abegg, zvikamu zvemagetsi zveSchneider, zvichingodaro zvinoshandiswa mune yedu 5T / zuva flake chando michina.
Heano mamwe mifananidzo kune zvimwe zvikamu uye ruzivo mune yedu 5T / zuva flake chando muchina.
3. Parameter wepa 5T / zuva flake chando muchina.
1 Parameter Maitiro
2 Tembiricha yakatarisana 30 ℃
3 Yakadzika inlet mvura tembiricha 20 ℃
4 Tsime remvura Mvura nyowani
5 Magetsi 400V / 4P / 50Hz
6 Kushanda mamiriro Yakanyatsofefeterwa nemhepo
7 Muenzaniso ZVOKUDZWA-R4W
9 Ice zuva nezuva inobereka chinzvimbo Matani mashanu echando anoputika mukati maawa makumi maviri nemana
10 Refrigeration chinzvimbo 25.3KW
11 Kupisa kwemhepo Kubvisa 18 ℃ - Kubvisa 20 ℃
12 Flake chando tembiricha Pazasi -5 ℃
13 Flake chando ukobvu 1.8-2.2mm
14 Simba rekushandisa kugadzira chando 75KWH yekugadzira 1 tani yechando mafuru
15 Ruzha 78dBA mukati memamita maviri
16 Simba rinomhanya remuchina wakazara 15.625KW Simba rekuchengetedza !!!
18 Mvura inotonhorera pombi pombi uye fan mota 1.5 + 0.55 = 2.05KW
19 Mvura inodzora kupisa kupisa chinzvimbo 100KW
20 Reducer yechando aricheke mu evaporator 0.55KW
21 Mvura inotenderera pombi mu evaporator 0.12KW
22 Kudzora system PLC chirongwa chekudzora
23 Ice flake arambe achirema 900 ~ 950kg / m3
24 Kurema kwemafuta echando echando 1500kgs
25 Divi reiyo flake chando muchina ZXWxH = 2300x1900x1800mm
26 Vamwe ......
4. Dhirowa yeyakajairwa 5T / zuva flake chando chirimwa.
Vatengi vazhinji vangade kusarudza 5T / zuva flake chando muchina unoshanda pamwe chete 3T chando kamuri pamwechete. Ndiwo zvakare muyero wedu we5T / zuva flake chando chirimwa.
Iyo 5T / zuva flake ice muchina iri pamusoro peiyo 3T chando kamuri.
Imba yechando inogadzirwa nemapanze akaputirwa anopisa nehupamhi hwe100mm, uye mazaya echando anogona kuchengetwa mukati musinga nyungudike kwenguva yakareba. Mazaya echando anongowira mukamuri rechando.
Imba yechando ye3T inogona kuchengetedza matani matatu echando, uye izvo zvinokwana kuchengetedza ese echando mafake anoitwa munguva yehusiku ne5T / zuva flake ice muchina.
Mukudhirowa iyo, unogona kuona shongwe inotonhodza mvura padivi pechando muchina. Iyo inoshandiswa kuburitsa kupisa mukati memhepo kubva kune chando system. Iyo inotonhorera mvura shongwe inokurudzirwa kuve iri munzvimbo yakavhurika, senge pamusoro pechivakwa, kunze kwenzvimbo uye zvichingodaro. Iyo mvura yakanyoroveswa yakagadzirirwa inokurudzirwa zvakanyanya kuti ishande munzvimbo dzinopisa.
Saizi yeiyo chando kamuri inogona kugadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Kunze kwemvura inodzora condenser, isu tinogona zvakare kushongedza muchina nemhepo kutonhodza condenser + mhepo inotonhorera mafeni. Uye isu tichagadzira dhizaini zvinoenderana neyemukati mekunze uye kwakadzika kwakanyanya tembiricha.
5. Chigadzirwa mune ramangwana uye kushandiswa kweiyo 5T / zuva flake ice muchina.
Yakaoma uye yakanyatso-chando echando mazaya ane kutonhora kwakanaka kuita. Mazaya echando anogona kushandiswa kuita chando chegungwa, kuchengetedza chikafu chitsva, kugadzira chikafu, kutonhodza kongiri, pabhodhi hove icing, kushandiswa kwemakemikari zvichingodaro.
6. Kuendesa, kutumira, sevhisi uye garandi ye5T / zuva flake chando muchina.
Imwe chete tsoka yemamita makumi maviri inopfuura kukwana kune izere 5T / zuva flake chando chirimwa, kusanganisira iyo 5T / zuva flake chando muchina, chando kamuri, simbi furemu yekutsigira echando muchina uye mwanakomana.
Isu tinopa pamhepo-kubvunza sevhisi yemahara muhupenyu hwemuchina kwenguva yakareba. Isu tinopa zvinhu zvemahara neDHL kana zvikamu zvemuchina zvine dambudziko remhando mukati mewarandi.
Iyo flake chando evaporator garandi ndeye makore makumi maviri, isu tinovimbisa iyo evaporator haina gasi rinodonha, hapana chakaipa mukati memakore makumi maviri.
Makore matatu ari ewaranti yeMotors, mapampu, mabheyaringi, mafeni, zvemagetsi uye zvimwe zvinofamba zvikamu.
Makore gumi nemashanu ndiyo garandi yemidziyo yekumanikidza, condenser, compressor, mavhavha uye zvichingodaro.
7. FAQ nezve 5T / zuva flake chando muchina.
Mubvunzo: Yakadii 5T / zuva flake chando chirimwa?
A: Mutengo we5T / zuva flake chando chirimwa chiri pakati peUS $ 13500 uye USD 20000.
Iyo mitengo inoenderana nemuchina wezvinhu zvinyorwa uye saizi yeiyo chando kamuri. Mitengo yacho yakavakirwa paFOB SHENZHEN USD, uye haina kusanganisira mutengo wekutakura. Mutengi anofanira kubhadhara mutoro wega.
Mubvunzo: Ndeupi musiyano uripo pakati pedu echando chando muchina uye mamwe maChinese flake chando muchina?
A: Musiyano mukuru isimba redu rekuchengetedza magetsi.
Tiri kushandisa Chromed sliver alloy kugadzira evaporator yeakanakisa uye anonyanya kushanda kupisa kupisa.
Mumamiriro akafanana ekushanda, yangu 5T / zuva flake chando muchina inodya 375KWH yemagetsi mazuva ese, nepo mamwe maChinese anopisa echando michina inodya ingangoita 525KWH mazuva ese.
Mazuva ese, mutsauko i150KWH yemagetsi.
Mumakore gumi, mutsauko uri 547,500 KWH yemagetsi.
Mumakore makumi maviri, musiyano uri 1,095,000 KWH yemagetsi.
Yako huru yekugadzira mutengo wekugadzira chando magetsi. Kiyi yekubudirira uye kunobatsira bhizimusi rechando ndiyo michina simba rekuchengetedza tekinoroji.
Nekombinoroji yangu yekuponesa simba, unogona kuwedzera yako ice purofiti nekubhadhara mari diki yemagetsi.
Nekombinoroji yangu yekuchengetedza simba, unogona kutengesa chando nemutengo wakaderera pane vakwikwidzi vako, uye unogona kukurumidza kudzinga vakwikwidzi vako kunze kwemusika.
Uyezve, isu tine chimwezve chishandiso chekukubatsira kuchengetedza magetsi.
Ngatizvishevedze magetsi saver. Masaini emagetsi asingabatsiri / asingashande anogona kusefetwa nemasevha emagetsi, nekudaro anogona kudzora mashandisiro esimba rese ne5% -8%.
Mutengo wesaver simba unotanga kubva kuUSD 3000 / seti, uye zvinoenderana neyakaisirwa yakazara simba rehurongwa.
USD 3000 ndiwo mutengo we5T / zuva flake chando chemagetsi saver.
10T / zuva flake chando muchina
15T / zuva flake chando muchina
20T / zuva flake chando muchina
25T / zuva flake chando muchina
30T / zuva flake chando muchina
Makuru machena echando michina
Pashure: 0.6T kuutio muchina
Zvadaro: 30T flake chando muchina